Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Kenya oo Doortay Gudoomiye Cusub – SBC
Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Kenya oo Doortay Gudoomiye Cusub
Saxafiyiinta somaliyeed ee ku nool dalkan Kenya ayaa shalay galab xaflad ay ku qabsadeen hotelka Madiina Mall ee magaaladan Nairobi waxay ku doorteen gudoomiyaha cusub ee suxufiyiinta qurba joogta somaliyeed .
Xafladan doorsaha ayaa ahayd mid ay si wayn uga soo qayb galeen dhamaan bahda suxufiyiinta somaliyeed ee ku nool dalkan Kenya , waxa sidoo kale doorashada ka soo qayb galay madax aad ufara badnayd kuwaas oo doonayay in ay la socdaan qaabka ay u dhacaysay doorashadu .
Ugu horeyn inta aan laguda galin doorashada ayaa waxaa goobta Cv_yadooda ka aqriyaya laba musharax ee isu soo taagay doorashada gudoomiyanimada saxafitiinta qurbajoogta somaliyeed ee dalkan Kenya waxana mid walba uu sheegay waxa uu qaban doono hadii uu ku guulaysto jagada .
C/qafaar shire oo ka mid ahaa tartamayaasha jagadan oo halkaas ka aqriyay Cv_giisa ayaa sheegay in mudo uu ku soo jiray bahda saxaafada uu hadana doonayo in uu u tartamo jagadaas isagoo sheegay in hadii la doorto uu wax wayn u qaban doono wariyaasha somaliyeed ee ku sugan dalkan Kenya isagoo sidoo kale sii raaciyay in uu la socon doono xaalad walba uu ku suagn yahay wariye kasta oo ku nool dalkan .
Intaas kadib waxay gudiga doorashadu ay soo gudbiyeen in doorashadu ay bilaabanayso waxana qof kasta oo wariye ah uu dhiibtay codkiisa oo uu siinayay mid kamkid ah laba musharax oo kala ahaa Aadan Kismaayo iyo C/qafaar Shire .
Waxana ugu dambayntii gudiga doorashadu ay tiriyeen codadkii ay kala heleen labada musharax waxana cod batay C/qafaar shire oo helay codad gaaraya 56 cod halka Aadan Kismayo uu helay 26 cod waxana intaas kadib gudiga doorashadu ay cadeeyeen in jagadaas uu si toos ah ugu guulaystay C/qafaar shire.
Doorashadan gudoomiyaha ayaa waxaa sidoo kale ka soo qaybgashay wariye Xoriyo Cabdulqaadir Sheikh Ali oo bartamihii bishii 9 aad kooxo hubaysan ay ku dhaawaceen gudaha magaalada Galkacyo xili ay ka soo baxday shaqadeedii waxayna sheegtay in ay aad ugu faraxsantahay ka soo qayb galka shirka iyadoo gudaha magaalada Nairobi ku sugnayd wax sadex maalin ka yar waxayna ugu baaqday saxafiyiinta isku duubni meel kastoo ay joogaan
Doorashada kadib waxaa goobta ka hadlay masuuliyiintii ka soo qaybgashay doorashada waxayna intooda badan ay cadeeyen in ay si aad ah ugu faraxsanyihiin qaabka ay doorashadu u dhacday waxayna kula dardaarmeen masuulka cusub ee jagadaas ku guulaytay in laga doonayo shaqo adag oo uu dhabarka saarsaday.
Dalkan Kenya waxa ku sugan suxufiyiin aad u farabadan kuwaas oo ka soo cararay dhibaatada suxufiyiinta loaan ogu gaysanayo gudaha dalka somaliya waxayna ay sheegay in masuulkan cusub looga baahanyahay in uu siwayn ula socda xaalada wariyaasha iyo dhibka ay qaban.